Japana: Ndeha ho any an-tsaha daholo ry tanora ! Ny fiovan’ny fambolena japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2018 8:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, 繁體中文, 简体中文, bahasa Indonesia, English
Ho an'ny firenena fantatra indrindra amin'ny fifikirany amin'ny fototra ambanivohiny, manjonitra ny endriky ny sehatra fambolena japoney, ary efa hatry ny ela izany. Raha fintinina : miha-antitra haingana ny mpiasa ary tsy ampy ireo mpirotsaka ho amin'ny fandraisana an-tànana indray ireo fitrandrahana. Nihena ny vidin'ny vary ary tena kely ny mety hisiana fanavaozana ara-drafitra, raha ilay federasiona matanjaka an'ny kaoperativan'ny fambolena Nokyo(農協)[amin'ny teny anglisy] no jerena, ary izany, na iza na iza antoko eo amin'ny fahefana [amin'ny teny anglisy].
Atolotry ny fikambanana Tokyo ny antontanisa ao anatina tatitra mitondra lohateny mampihoron-koditra saingy mitombina, izay antsoina hoe :” Ny fitontonganana mampidi-dozan'ny fambolena japoney” [amin'ny teny anglisy]. Mazava ho azy fa manomboka tamin'ilay antontan'isa malaza be an'ny nogyo (農業 /fambolena) izany : ”nidina ambanin'ny 40% ny tahan'ny fahafahana mamatsy tena ara-tsakafon'i Japana”.
Na izany aza, andalam-piovana ny toedraharaha mikasika ny fambolena. Miaina fiovana ho amin'ny tsara na ny ratsy ireo toerana fiompiana, toy ny efa nosoratan'i Schilla Alecci tao amin'ny lahatsorany : ”Japana : fambolena : ny fironana farany ho an'ireo olo-malaza”[amin'ny teny anglisy]. Manasongadina endrika vitsivitsin'ity fiovana ity ilay lahatsoratra, ao anatin'ny fanandramana hahatakatra ny halehibeny.
Mandeha miseho any amin'ny toeram-piasany ! avy amin'ny megabn ao amin'ny flickr
Fambolena sy fahazoana antoka ara-tsakafo
Anisan'ireo antony nahatonga ity fiovana toe-tsaina ity ny olan'ny fahazoana antoka ara-tsakafo miha-lehibe lalandava. Afaka novakiana tamin'ny herinandro farany teo tao amin'ny blaogy What Japan Thinks Growing fa ”mampiahiahy japoney 5 amin'ny 6 ny fahazoana antoka ara-tsakafo”[amin'ny teny anglisy].
Fanontaniana 2: Iza amin'ireto ezaka manaraka ireto no horaisinareo manoloana ny fahazarana ara-tsakafonareo? (halehiben'ny santionany= olona 1 089, fanontaniana misy safidy maro)
Mividy betsaka araka izay tratra ny vokatra japoney : 69%
Mitandrina ny daty famokarana, daty farany azo hanjifana, daty fahapotehana sns : 66%
Mividy araka izay tratra ireo vokatra izay tsy dia misy fanampiny loatra : 51%
Fampiasana voafehy ny sakafo efa vita (efa voakarakara): 25%
Hafa : 3%
Tsy dia misy zavatra manokana loatra : 6%
Mametra ny fankanesana any amin'ny trano fisakafoanana : 16%
Mpanjifa maro no vonona handoa vola bebe kokoa mba hahazoana antoka fa ”mahasalama” ny sakafo haniny, indrindra nanomboka tamin'ny fahatongavana saina nateraky ny loza tamin'ny 2008, izay nahavoapoizina olona am-polony mahery tamin'ny fihinanana hena baolina [amin'ny teny anglisy] nivaingana nafarana avy any Shina. Ny ohatra tsara indrindra dia ny blaogy Tamagomama izay manao lisitrana tolokevitra [amin'ny teny japoney] ho an'ireo vehivavy bevohoka, anatin'ny lahatsoratra iray.
Na dia lafolafo kely kokoa aza izany, iangaviana tompoko, sakafo tsara sy mahasalama irery ihany vidiana. Raha mbola azo atao, tokony afaka milaza ny hoe iza no mamokatra ny sakafonareo ianao. Fadio ireo sakafo nafarana, tsy sinoa irery ihany, fa amerikana ihany koa. Manandrana misafidy sakafo vokarina ao Japana na eny amin'ny manodidina. Ny tena tsara indrindra dia ny fahafahana milaza hoe iza no mamokatra azy. Ianareo no tokony hiaro ny ain'ny fianakavianareo. Aza miandry ny hafa hanao an'izany amin'ny toeranareo.
Fambolena sy tsy fananana asa
Faritan'i Nina Fallenbaum ny fandraisany anjara amina fandaharanasa fitaratra amin'ny fambolena [amin'ny teny anglisy] .
Izay, mazava be ilay hevitra: mandefa maimaimpoana olona avy ao an-drenivohitra eo amin'ny 18 ka hatramin'ny 40 taona eo ho an'ny amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra, mandritra ny 5 andro, mba hianarany ireo fomba fambolena, hijereny ny toerana fiasana, ary ihany koa mety haharisika azy haka ity karazana fomba fiaina ity. Tantanina ONG momba ny tontolo iainana, niantoka ny sakafo, ny sarana TGV, ny fampiantranoana anay-rehetra (ary tsy teratany japoney akory aza aho) ny fanampiana avy amin'ny ministera japoney misahana ny fambolena. Toa hafahafa izany, fa raha oharina amin'ny vola lany tamin'ny hetsika famenoana ny banga tamin'ny banky, endrika tena tsy lafo vidy hampandehanana indray ny toekarena – ary hahazoan'ireo faritra ambanivohitra, tanora sy ny sehatry ny fambolena tombony izany.
Fambolena sy Aterineto
Ireto misy trangana mpamboly vitsivitsy mampiasa ny herin'ny Aterineto.
Mampiasa aterineto mba hampandrosoana ny fantsona fizaràny [amin'ny teny japoney] i Yasai8313. Nahavita nampiasa ny lazan'ny blaoginy mba hampandrosoana ny varotra ataony i Shinichi Soga, izay mamboly voatabia, toy ny tantarain'ny Japan Times ao anatin'ny lahatsoratra ”Mitoraka blaogy mba hahomby ireo tanora tantsaha” (Younger farmers blogging their way to success‘[amin'ny teny anglisy]). Mitantana tranonkala mivarotra vary ny Seebit, orinasa izay mamokatra votoaty an-dahatsary ho an'ny aterineto. Manolotra sary amin'ny webcam izay hahafahan'ny olona mijery ny fomba fanirian'ny vary ilay orinasa. Misy tambajotra sosialy ho an'ireo Japoney miasa amin'ny nogyo (fambolena) : hahafahana mividy sy mivarotra entana fambolena ihany koa ny Boku-nou (ny fambolenay) [amin'ny teny japoney],
Afaka atao ihany koa ny fianarana an-tambajotra. Nanolotra ohatra iray tao amin'ny blaoginy i Toshihide Muraoka [amin'ny teny japoney].
Manomboka malaza ny Internet Agri School, tarihin'ny foibe fampianarana fambolena ao amin'ny prefektioran'i Akita. Afaka mahazo lesona fambolena ary mianatra ny hahafantatra ny tontolo natioralin'ny prefektioran'i Akita amin'ny alalan'ny Aterineto ireo mpianatra. Hatramin'ny namoronana azy tamin'ny 2001, olona teo amin'ny 200 teo, manerana i Japana, ao anatin'izany i Tokyo, Aichi sy Nagasaki, no nianatra tao amin'ity sekoly ity. Isantaona, feno avokoa ireo andiany (mpianatra 30). Nanomboka ny fitrandrahany tao amin'ny prefektioran'i Akita ny mpianatra 9, nofanina tamin'ny fambolena tamin'ny alalan'ny fampianarana an-tambajotra.
Fambolena sy indostria hafa
Mamerina mijery ny fifandraisany amin'ny tontolo ambanivohitra ireo orinasa sy fikambanana tsy misy ifandraisany amin'ny fambolena. Ao anaty ohatra iray, anehoan'ny blaogy marketer and blogger happy-kernel [amin'ny teny japoney] hevitra ny momba ny vaovaon'ny famoronana toeram-piompiana sy fambolena ara-barotra najoron'ny Kakegawa City Amateur Sports Association [amin'ny teny japoney] (Fikambanan'ny fanatanjahantena tsy matihanina ao amin'ny tanànan'i Kakegawa) ao amin'ny prefektioran'i Shizuoka.
Toy ny fahafahan'ny fampaniriana legioma hanampy ankizy hihoatra amin'ny fahakiviany amin'ireo legioma ireo ary mampivelatra ny fahaizana mandinika, afaka mandrisika koa ireo olon-dehibe mpankafy hena izay tsy dia manao fanatanjahantena loatra mba hanova ny fomba fiainany ka hampidirany ny fanatanjahantena sy ny legioma ihany koa ny fambolena legioma ! Araka izany, toa mitombina kokoa raha manandrana ilay fikambanana. Satria hahazo ”legioma mbola tsy nialin'andro sy mahasalama” ary ”fanatanjahantena sy fahasalamana” ihany koa ireo mpandray anjara (amin'ity fandaharanasa anaty toeram-piompiana sy fambolena ity). Mety hahazo lanja ity fomba fiaina mahasalamana ity amin'ny hoavy.
Kely ary tantaninà fianakaviana ny ankamaroan'ireo toeram-piompiana sy fambolen'ny japoney, ary ny sarin'i ojiichan et obaachan (dadabe sy bebe) mikarakara ny sombin-taniny isanandro, sehatra mampiavaka ny vakodrazana japoney izy tsy dia manalavitra loatra ny zava-misy. Inona ary no hitranga avy eo ? Mbola mila mijery ny hoe ho aiza no hitondran'ireto fironana vaovao ireto antsika saingy toa ampahany amina onja lehibe mibontsina taza-maso izy ireny.